Xasan Tuke oo isku soo taagey doorashada Hogaanka GOS
Posted by shiikha on 18/11/2012 14:49:24
Xasan Tuke oo isku soo taagey doorashada Hogaanka GOS.
Mudane Xasan Cabdullahi Xasan(Xasan Tuke) oo degan magaalada Toronto, islamarkaana ahaa ciyaartooydii hore ee kubadda koleyga dalka Soomaaliya barisamaadkii ayaa noo sheegay inuu u sharaxan yahey doorashada GOS ee xilka Gudoomiyaha hadii uu Allah idmo. Mudane Xasan Tuke waa aqoonyahan ka soo jeeda qoys isboorti, waxaana dhaley odey isboorti macalinkii weynaa Macalin Tuke.
Mudane Xasan Tuke oo degan magaalada Toronto, islamarkaana ahaa ciyaartooydii hore ee kubadda koleyga dalka Soomaaliya barisamaadkii ayaa noo sheegay inuu u sharaxan yahey doorashada GOS ee xilka Gudoomiyaha hadii uu Allah idmo. Mudane Xasan Tuke waa aqoonyahan ka soo jeeda qoys isboorti, waxaana dhaley odey isboorti macalinkii weynaa Macalin Tuke.
Wuxuu noo sheegay inuu soo gudbin doono barnaamijkiisa marka ay soo dhawaato xiliga doorashada, islamarkaana uu rajeynaayo haduu qabto xilkaas inuu wax badan oo isbadal ah lagu arki doono isboortiga Soomaaliyeed, waxa ugu horeeyana aan xoogo saari doono waxaa sidii loogu shaqeyn lahaa sharciga loona soo celin lahaa nidaamkii isboortiga lagu yaqaaney, anagoo kale kaashaneynaa wasaarada isboortiga iyo dhalinyarada dalka Soomaaliya.
Docda kale waxaa iyana jira in musharaxiin badan ay rajeynayaa inay soo bandhigaan musharaxnimadooda marka la gaaro doorasha sanadka soo socdo horaantiisa insha Allah.
Waxaa kale ognahey in xiriirada iyo GOS dhaxdooda ay ku kale aragti duwan yihiin cidii hogaanka GOS qaban laheyd, halka shacabka Soomaaliyeed ee isboortiga jecel ay qabaan in isbadal dhab ahi u dhaco, iyadoo la filaayo in wajiyo cusub soo baxaan.
Khilaafka GOS dhexdooda iyo kale shaki soo kale dhexgalay wuxuu sababi doonaa in wax badan oo markii hore qarsoonaa ay soo baxaan, ka hor dhici maayo xogta aan haayo iyo howlaha socdo markale ayaan wax ka dhihi doonaa, balse waxaan idin sheegayaa inaan ka shaqeyn doono sidii isboortiga Soomaaliyeed ay uga muuqan lahaayeen dhamaan dadka Soomaaliyeed islamarkaana uu u noqon lahaa mid gaara Raaskambooni ilaa Lawyacade insha Allah.